एस्तरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – Word of Truth, Nepal
त्यतिबेला इस्राएलका राजा कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? यहूदीहरूका यहोवा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यहूदीहरू बेबिलोनीहरूद्वारा कैदमा लगिएका थिए। अनि जर्क्सीजको शासनकालमा धेरजसो यहूदीहरू आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा थिए। यहूदीहरूको एउटा सानो समूह मात्र यरूशलेममा सोलोमनद्वारा निर्मित महिमित मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्न फर्केको थियो जुन मन्दिर नबुकदनेसरले ध्वस्त पारेका थिए। के परमेश्वर आफ्नो सिंहासनमा अझै विराजमान हुनुहुन्थ्यो त? के शासन यहोवा परमेश्वरकै हातमा थियो त? के बेबिलोनी र फारसीहरूले परेमेश्वरको शासनलाई छिन्नभिन्न पारिदिएका होइनन् र? संसार र संसारमा भएका सबै मानिसका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वास्तवमा को थिए – फारसको साम्राज्य कि यहोवा परमेश्वर?
२) — परमेश्वरले अप्रत्यक्षरूपमा (”पर्दाको पछाडिबाट”) काम गर्नुभई, सबै घटना र परिस्थितिको नियन्त्रण गर्नुभई, मानिसहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै इच्छाअनुसार चल्न दिनुभई अन्तमा आफ्नो इश्वरीय इच्छालाई पूरा गराउन सक्नुहुन्थ्यो। (परमेश्वरले यहूदा इस्करयोती लगायत अन्य दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्नो पुत्रलाई धोका दिन र क्रूसमा मार्न दिनुभयो, तर यी सब घटनाहरू मिलेर अन्तमा परमेश्वरकै सिद्ध इच्छा पूरा भयो ( लूका २२:२२; प्रेरित २:२३)।
अर्कोतिर वश्तीको अनाज्ञाकारितालाई कडा कारवाही गरेको खण्डमा राज्यभरिका महिलाहरूले उनको खराब नमूनाबाट यो पाठ सिक्न सक्थे कि अनाज्ञाकारी भएर कुनै फाइदा नहुने रहेछ। शाही-उर्दी राज्यभरि निकालियोस् ताकि पत्नीहरूले अनादर गरेको खण्डमा कारवाही हुन्छ भनी महिलाहरूले जानोस्: “यस्तो व्यवहारको नमीठो फल रानीले त भोग्नुपर्छ भने सर्वसाधारण महिलाले त झन् कति बढ्ता गरी।” राजालाई ममूकानको सल्लाह मन पर्यो, शाही-उर्दी निकालियो, वश्तीलाई पदबाट हटाइयो अनि उनको सट्टामा उनीभन्दा _____________ __________ स्त्रीलाई रानीको पद दिइने भयो (१:१९)। ती स्त्री थिईन् –एस्तर!
परमेश्वरको उद्देश्य यो थियो — एस्तरलाई रानीको पदमा राख्नु। उक्त उद्देश्य पूरा गर्न रानीको पद रिक्त हुनुपर्थ्यो। पहिलो अध्यायमा त्यो पूरा भयो। राजाले अब एउटी अर्कै रानी रोज्नुपर्ने भयो। परमेश्वरको रोजाइ थियो — एस्तर। राजाले कसलाई रोजे त?
हामीले अघिल्ला दुई अध्यायहरूमा परमेश्वरको हातले सक्रियरूपमा काम गरिरहेको देख्यौं — वश्तीलाई पदच्युत गर्नुमा र एस्तरलाई पदस्थापन गर्नुमा। अब अर्को पाठमा हामी शैतानको हातले सक्रियरूपमा आफ्नो हतियार हामानद्वारा काम गर्न थालेको देख्नेछौं! के शैतान परमेश्वरभन्दा शक्तिशाली छ त? एस्तरको पुस्तकको अन्त्यमा पुग्दासम्म हामी यसको निष्कर्ष पत्ता लगाउनेछौं!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 19:55:332020-04-28 14:16:52एस्तरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यूसुफ आफूलाई दाजुहरू समक्ष प्रकट...हामानको दुष्ट योजना